La Yaabka Aduunka:Gabar 26 sano jir ah oo u muuqaal eg 70 sano jir (VIDEO+Sawiro) – SBC
La Yaabka Aduunka:Gabar 26 sano jir ah oo u muuqaal eg 70 sano jir (VIDEO+Sawiro)
Gabar 26 sano jir ah oo u dhalatey wadanka Vietnam ayaa muuqaalkeeda oo si deg deg ah isku badaley waxaa xiligan wixii ka dambeeya loo aqoonsadaa Islaan waayeel ah maadama ay u eg tahay ama ay noqotey qof 70 sano jir ka weyn.
Haweenay oo lagu magacaabo Nguyen Thi Phuong ayaa waxaa ku dhacay cudur allergic oo ay rumaysan tahay in ay ka qaaday cuntada badda oo ay cuntey sanadkii 2008-dii, kaasi oosababey in uu isbadalo muuqaalkeeda jirka gaar ahaan wajiga oo kaduudmay, maqaarka kale ee jirka oo u muuqaal eg qof 70 sano ka weyn.
Dhakhaatiirta ayaa xaalada haweenaydan la yaabay, waxaana ay sheegeen in cudurkan uu yahay mid dhif iyo naadir ah oo ku dhaca dad kooban, waxaana ay sheegeen in daaweyntiisa ay tahay mid aad u rajo yar.
Sawir laga qaaday Nguyen Thi Phuong xili ay aheyd arooskeeda iyadoo 21 sano jir ah sanadii 2006-dii ayaa waxaa ka muuqanaya iyadoo ah gabar quruxley ah, balse 5 sano ka dib maalmo yar gudahood ayaa iyadoo 26 sano jir ah waxay u muuqaal ekaatey duq 70 sano jir ah.
Haweenaydan ninka ay u dhaxdo (Saygeeda) Nguyen Thanh Tuyen oo 33 sano jir ayaa sheegay in uu aad u jecel yahay gacalisadiisa oo mar aheyd quruxley, waxaana uu sheegay inaanay waxba iska badalin jacalyka uu qabo xaaskiisa.
Mrs Nguyen ayaa mudo la tacaalaysay cudurkan iyadoo daaweyn kala duwan ka qaadatey farmashiyeyaasha iyo goobaha caafimaadka ee deegaanka ay ku nooshahay iyada iyo Saygeedu waxay sheegeen inaanay u hayn dhaqaale ay ku bixiyaan Isbitaalka lagu dabiibo ama lagu baaro cudurkeeda.
“Dhab ahaantii aad ayaan uga argagaxay muuqaalka jirkeyga, xitaa hadii aan jiifo waan is xoqayaa, marka aan qaato daaweyn mudo bil ah caadi ayaan noqonayaa laakiin jirkeyga wuxuu wali u egyahay 70 sano jir qof ka weyn” ayay tiri Mrs Nguyen.
“muuqaalka surkeyga, horaadaheyga & waliba luqunteyda waxay noqdeen qof da’a ah oo lale, xitaa horaadahayga ayaa noqdey haweenay caruur badan dhashey oo kale, laakiin anigu xitaa hal cunug ma dhalin” ayay hadalkeeda sii raacisay Mrs Nguyen.
Mrs Nguyen waxay sheegtey in maskaxdeeda, ilkaha, indhaha iyo qaybo kale oo ka mid ah jirkeeda inaanay waxba iska badalin marka laga reebo wajigeeda oo uu ka muuqdo duqnimo ay aanay da’adeeda gaarin.
Link-ga VIDEO-ga hoose ka daawo muuqaalka la yaabka ah ee haweenaydan kana argagaxsan sida wajigeedu isku badalay.